मिसेस् ग्लोब २०१५का लागि अप्सरा चीनतर्फ - halokhabar.com मिसेस् ग्लोब २०१५का लागि अप्सरा चीनतर्फ - halokhabar.com
(No Comments) November 26, 2015
काठमाडौं ९ मंसिर । विवाहित महिलाहरुमा केन्दि«त अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिसेस् ग्लोब २०१५’ मा नेपालका तर्फबाट सहभागिताका लागि अप्सरा बस्नेत चीनतर्फ प्रस्थान गरेकी छिन् । चीनको सेन्जेन शहरमा यही नोभेम्बर २६ देखि डिसेम्बर ६ तारिखसम्म संचालन हुने यो प्रतियोगितामा अप्सराले विश्वका पचास भन्दा बढी मुलुकका विवाहित सुन्दरीहरुसित प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । अप्सरा केही समय अगाडि मात्रमा पोखरामा सम्पन्न मिसेस् पोखरा २०१५ का विजेता हुन् । यस अघि मिसेस् ग्लोबको २०१३ र २०१४ को संस्करणमा नेपालको तर्फबाट रजनी थापाको सहभागिता रहेको थियो । जसमा रजनीले २०१३ मा मिसेस् फिलान्थ्रोपी र २०१४ मा लिडर अफ द इयरको अवार्ड जितेकी थिइन् । अप्सराको मिसेस् ग्लोबमा सहभागिताका लागि ईप्लानेट प्रा. लि. ले सहकार्य गरेको हो भने मिसेस् नेपाल २०१३ की विजेता रजनी थापाले यसका लागि संयोजन गरेकी हुन् ।